उधारो औषधि दिएँ, तर उनले श्रीमती बचाउन सकेनन् - IAUA
यति अनुभव भएपछि मलाई आँट आयो र आफैंले बानेश्वरमा फार्मेसी सुरु गरेँ। दुई वर्ष सञ्चालन गरेपछि वीर अस्पताल अगाडि ‘हनुमान फार्मेसी’ नाम राखेर व्यवसायलाई विस्तार गरेँ। जहाँ ६ जनाले रोजगारी पाएका छन्। मेरो फार्मेसी चौबीसै घन्टा खुल्ने भएकाले यहाँ कर्मचारी पालैपालो खट्ने गरेका छन्।
एक पटक दशैंको बेला सबै फार्मेसी बन्द थिए। डाक्टरहरुले भने, ‘बिरामीको चाप छ, तपाईंले चाहिँ खुल्ला राखेर सहयोग गरिदिनुपर्यो।’ सेवामूलक व्यवसाय भएकाले मैले स्टाफलाई बिदा दिएँ र आफैं दिनभर फार्मेसीमा बसेँ।
धादिङबाट श्रीमती लिएर आएका एक जनाले उपचार गर्दागर्दै पैसा सिध्याएछन्। मकहाँ आएर रुँला जस्तै गरे र उधारो औषधि लिएर गए। तर, उनले श्रीमती बचाउन सकेनन्। औषधिको पैसा पछि तिर्छु भनेर घरको ठेगाना दिएका थिए। पछि मैले स्टाफलाई उनको घरमा गएर ‘एउटा खसी भए पनि लिएर आउनू’ भनेर पठाएको थिएँ, तर उनको आर्थिक अवस्था ज्यादै दयनीय रहेछ। ६ जना छोरी रहेछन्। बिहान-बेलुका खान पनि समस्या रहेछ। मेरा स्टाफले त्यो बिजोग देखेर उल्टै एक हजार दिएर आएछन्।
अरुकहाँ काम गर्दा बिरामीको परिवार गरिब छ, दु:खी छ भनेर उधारो औषधि दिन सकिन्न थियो। तर आफ्नै भएपछि कहिलेकाहीँ ‘सेवा नै धर्म हो’ भन्ने भावले पनि धेरैलाई सहयोग गर्छ। फार्मेसी व्यवसायमा दु:खीको सेवा गर्ने मौका मिल्छ।
कहिलेकाहीँ आवारा ठिटाहरुले धम्की दिने गरेको अनुभव पनि मसँग छ। रातको समयमा उनीहरु झुम्म बनाउने खालको औषधि (नार्कोटिक) मागेर हैरान पार्छन्। ‘डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनबिना दिन मिल्दैन’ भन्दा उल्टै थर्काउँछन्।
Previous Previous post: बारम्बार ढोकामा ताल्चा लगाउन बिर्सें जस्तो लाग्छ ? ओसीडी पो भयो कि !
Next Next post: १०० किलोकी जरिन् कसरी पुगिन् ५७ ?